ဂေဇက် မန်ဘာများ စာရင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Editor's Notes » ဂေဇက် မန်ဘာများ စာရင်း	188
ဂေဇက် မန်ဘာများ စာရင်း
Posted by Anzartone on Mar 1, 2012 in Editor's Notes, Myanmar Gazette | 188 comments
***New Version (still working) ***
ဂေဇက်မှာ မန်ဘာဝင်ထားသူပေါင်း ၇၀၀၀ ကျော် ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အခု ကျနော် တင်ထားတဲ့ ပို့စ်ထဲမှာ ဂေဇက် မန်ဘာ ၁၃၀ လောက်ပဲ ရှိနေပါတယ်။ ဒါဟာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျနော် သိသလောက် တွေ့မိသလောက်သာ စာရင်း ပြုစုထားခြင်း ဖြစ်လို့ပါပဲ။
ဒီစာရင်းထဲ မပါတဲ့သူများလည်း အောက်က ကွန်မန့်ထဲမှာ ပြောထားခဲ့နိုင်ပါတယ်။ ကျနော် ထပ်ပြီး ဖြည့်ပေးသွားပါ့မယ်။ (အနည်းဆုံး ပို့စ် (၁) ပုဒ် တင်ပြီးသူ ဖြစ်ပါက ပိုကောင်းပါမည်။) ပြီးတော့လည်း ကျနော့်အနေနဲ့ အမျိုးမျိုး ပြောင်းလဲလို့ ရနိုင်တဲ့ နာမည်ကို မြင်ရုံနဲ့ သူ့ရဲ့ မန်ဘာလင့်ခ် ကို ရှာဖွေဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ မန်ဘာလင့်ခ်ကိုပါ တစ်ခါတည်း ပြောပေးခဲ့စေချင်ပါတယ်။ ဥပမာ အားဖြင့် ကျနော့်ရဲ့ မန်ဘာလင့်ခ်ဟာ http://mandalaygazette.com/author/anzartone ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျား/မ ခွဲခြားထားတဲ့ နေရာမှာလည်း ကျနော် သိသလောက်သာ ဖြည့်ထားပြီး အချို့သော နာမည်တွေကိုတော့ ကျားမှန်း မမှန်း မသိလို့ “မသိ” ဆိုပြီး ဖြည့်ထားပါတယ်။
ဂေဇက် မန်ဘာများ စာရင်း (New Version)
အမည် (ကြည့်ချင်ရင် ကလစ်နှိပ်ပါ)
Kai (သူကြီး၊ သဂျီး)
Alinsett ၊ အလင်းဆက်
Amatmin ၊ အမတ်မင်း
Antimoe ၊ အန်တီမိုး
Ariyathitsa ၊ အရိယသစ္စာ
Aung MoeThu ၊ အောင်မိုးသူ
Aung Naing Lin
Aye.kk ၊ အန်တီအေး
Ba Gyi ၊ ဘဂျီး
BigBird ၊ ကိုငှက်ကြီး
BlackChaw ၊ ဦးဘလက်ချော
Burmese Or Chinese
Char Too Lan ၊ ချာတူးလန်
Chit Yim Htoo ၊ ချစ်ရင်ထူး
Comegyi ၊ ကမ်းကြီး
DaKaRa ၊ ဆရာသစ်
David ၊ ဒေးဗစ်
Deparko Deparko ၊ ဒီပါကို
Diamond Key ၊ ဦးစိန်သော့
Eain Soe May
Etone ၊ မအိတုံ
Fatty ၊ ဦးဖက်တီး
FattyCat ၊ ကိုကြောင်ဝတုတ်
Foreign Resident ၊ အဘဖော
ဒီစာရင်းထဲ မပါတဲ့သူများလည်း အောက်က ကွန်မန့်ထဲမှာ ပြောထားခဲ့နိုင်ပါတယ်။ ကျနော် ထပ်ပြီး ဖြည့်ပေးသွားပါ့မယ်။ ပြီးတော့ ကျား/မ ခွဲခြားထားတဲ့ နေရာမှာလည်း ကျနော် သိသလောက်သာ ဖြည့်ထားပြီး အချို့သော နာမည်တွေကိုတော့ ကျားမှန်း မမှန်း မသိလို့ “မသိ” ဆိုပြီး ဖြည့်ထားပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ တစ်ခု ပြောချင်တာကတော့ “မထင်ရှား” ဆိုတာ ဟိုမရောက် ဒီမရောက် ကို ဆိုလိုတာပါ … ( အဟီး .. ဒါက သူရို့ကို နောက်ထားဒါပါ .. :D )
ဒီထက်တော့ ပြောတတ်တော့ဘူး။ ဒီတော့ ဒါပါပဲလို့ … :D
အမည်၊ Click (View all posts)
AKKO ၊ ဒေါက်တာအောင်ကျော်ကျော်ဦး
ဘလက်ချော၊ ကိုဘလက်၊ ကိုချော၊ ကိုချောကလက်ကြီး၊ ဘဘဘလက်၊ ကိုကြီးဘလက်၊ ကိုဘချော
char too lan
chatsu ၊ ချက်စု
DaKaRa (ဆြာသစ် (ဒုနိမ်းမ်))
ထက်ဝေး၊ ဆရာထက်ဝေး၊ ဆေးဆရာ
Kaung Kin Pyar
Ko out of…
Lu Nyo Chaw
ကျား (မိဘုရား လေးယောက်ရှိဟုဆို)
photwenty ၊ ဖိုးတွမ်တိ
Sandy ၊ ဆြာမလေး
Shwe Ei Shwe Ei
Shwe Tike Soe
Swal Taw Ywet
Thaw Zin Loikaw
Thaw Zin Loikaw ၊ သော်ဇင် (လွိုင်ကော်)
Thel Nu Aye
Thu Ra Tha Wah
Yin Nyine Nway
YE YINT THU
ကိုပေါက်၊ လေးပေါက်၊ လောက်လောက်ပေး
ခပ် King ကင်း
အံစာတုံး၊ မဟာရာဇာ အံစာတုံး
ရင် နင့် အောင်
လုံမလေး မွန်မွန် လုံမလေး မွန်မွန်
ကျား သို့မဟုတ် ကြောင်
ရွှေ မင်း သား
ဟိန်း ၀င်း (ထားဝယ်သား)
captainAmerica ၊ အမေရိကန်ငတုံး
အော့ကြောလန်နန့်နန့်ထိုး ခွေးလယားသီး ဗြားကြီး
အင်ဇာဂီ၊ ကိုဂီ၊ ဂီဂီ
ကျား ၊ နျူးဘာ
( ပန်ကြားချက် ။ ။ ကျနော် အခုလည်း မန်ဘာတွေကို တတ်နိုင်သလောက် ဖြည့်ပေးနေပါတယ်။ အချို့သော ဂေဇက်မှ မန်ဘာ နာမည်များမှာ ရှာရခက်ပါသည်။ သို့ကြောင့် နောက်ဆုံးတင်ခဲ့သည့် ပို့စ်၏ အမည်ကို ဖြစ်စေ၊ ဂေဇက် လင့်ကို ဖြစ်စေ၊ အမည်ကိုဖြစ်စေ ပြောပြစေချင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဆိုရလျှင် ကျနော် အံစာတုံး (anzartone) ၏ ဂေဇက် လင့်မှာ http://mandalaygazette.com/author/anzartone ဖြစ်ပါသည်။ )
ထပ်မံ ဖြည့်စွက်တာတွေကို အက္ခရာစဉ် ပုံစံထဲမှာပဲ ထည့်လိုက်ပါတယ် … ။ အရင်ပုံစံထဲမှာ မထည့်တော့ပါကြောင်း ….။ About Anzartone
has written 306 post in this Website..
အချို့သော အရာတွေဟာ "ပြောင်" ပြီးရင် ပြန်ကောင်းဖို့ မလွယ်ဘူး။ အချို့အရာတွေ ကျတော့ တစ်မျိုး။ "ပြောင်" ပြီးရင် ပိုပို ကောင်းလာတတ်တဲ့ အမျိုး။ နှုတ်ခမ်းမွေး ပြောင်အောင်လို့ ရိတ်တယ်။ ရိတ်လေ .. သန်လေပဲ။ ထိပ်ပြောင်လို့ ဆံပင် သန်အောင် လုပ်တယ်။ မလွယ်ပြန်ဘူး။ ဒီသဘော .. ဒီသဘော။
View all posts by Anzartone →	Blog
Choo says: သြော်……. ရေမျေ့သဏင်းဆိုတာ 2009လောက်ထဲကရှိတဲ့ လူတလုံးလား အဲ့ဒီခေတ်တုံးက ဘရုတ်တို့ လူမင်းတို့ရော… ???
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 6551
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: အမငေးးး
ဒါဂျီးက ဘာလို့ ပြန်ပေါ်လာရဗျန်ဒါဒုံး …
မသိခြင်ထောင် ထောင်နေပါတယ်ဆိုနေမှ …
ဒီလူဒွေနဲ့တော့ ဒုတ်စွ … ဒုတ်စွ …
ငါ့ဒေါ့ မပါတဲ့လူတွေက ဝိုင်းဗျင်းတော့မှာဘဲ … အမြန်လစ်မှ .. ဝှစ် ..
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 26
veryloveman says: veryloveman , ကျား, ပရဟိတစိတ်ဓာတ်
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike ← Older Comments
Comments By Postယာဉ်အို စက်ဟောင်း ထိန်းမောင်းနေကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် - Foreign Resident - Ko chogyiကျွန်တော်နဲ့ Dead Body (0:1) - ကျော်လွင်ဖြိုး - တောတွင်းပျော်အားနာလွန်းလို့ ပါ - တောတွင်းပျော် - တောတွင်းပျော်ဘာရယ်ဟုတ်ဘူး... - ဂျစ်စူ - Ko chogyiအမေ့မျက်နှာ တစ်ရွာထင်ပါလို့ . . လိုက်ခဲ့တယ် . . လိုက်ခဲ့တယ် - ဂျစ်စူ - Ko chogyiအကျဉ်းသား Theory စဉ်းစား ဘယ်လိုချီ - Ko chogyi - Thint Aye Yeikဟောတော့ ... - aye.kk - လုံမလေးမွန်မွန်"ေ ကာက်ရိုးမီး" - aye.kk - weiweiကျွန်တော်နဲ့ Dead Body(0:2) - ko six - ဇီဇီနေ့ ချင်းပြန်သွားလို့ရတဲ့ အေးချမ်းလတ်ဆတ်မှုကိုအပြည့်အ၀ခံစားရမယ့် ရွှေပြည် - Thint Aye Yeik - ko sixမြေပုံထဲမှာ မပါချင်တဲ့လမ်း - Thint Aye Yeik - kaiမတူညီသော အတွေးအမြင်များ - ko six - ကျော်လွင်ဖြိုးအဝင်ကော - ko six - Mr. MarGaအရောင်ရင့်မှတ်တမ်း - ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၇ - ko six - kaiသူမတူတဲ့ မိန်းမသားများအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ရန်အတွက် - surmi - ဦးကြောင်ကြီးအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံလေး...လာအိုသို့ - Tawwin Pan - Foreign Residentအေးခဲနေသောအနောက်နိုင်ငံကနိုင်ငံများ........... - Tawwin Pan - Thint Aye Yeikချစ်ခြင်းမေတ္တာတရား - aye.kk - ဇီဇီဇလုံတောင်ဘုရား မရောက်ဖူးသေး သူများနှင့် ဘုရားသမိုင်း - ဦးကြောင်ကြီး - သျှားသက်မာန်ရေတွေကနိမ့်ရာကနေ မြင့်ရာကိုစီးဆင်းနေတဲ့နေရာ - Thint Aye Yeik - Mr. MarGaဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေမယ့် ၂၁ရာစု၏တိုးတက်လာသော အသုံးဝင်နည်းပညာများ - ဦးကြောင်ကြီး - သျှားသက်မာန်ကဗျာဆန်ဆန်လှချင်တိုင်းလှနေတဲ့...ကဗျာဝကမ်းခြေ (or) အပျိုစင်ကမ်းခြေ - ဦးကြောင်ကြီး - သျှားသက်မာန်"ပြည့် " - Thint Aye Yeik - aye.kk" ဟိုမှာဒီမှာ " - Thint Aye YeikPromotion လေးတွေလာပါပြီ............................... - Foreign Resident - Thint Aye Yeikဖုန်းတွေ၊နာရီတွေပေါ်မှာ တွေ့ရတတ်တဲ့(11:11)ရဲ့အဓိပ္ပါယ် - Mr. MarGa - Mr. MarGaကျိုက်ထီးရိုးဘုရားကိုနေ့ ချင်းပြန်စရိတ်ငြိမ်းနဲ့ သွားကြမယ် - kai - etoneCategory	Arts & Humanities
ကျပ်တသိန်းသို့ Top 10alinsett (95993 Kyats )Anzartone (95532 Kyats )kyeemite (91703 Kyats )weiwei (83430 Kyats )SP (81016 Kyats )padonmar (76894 Kyats )blackchaw (76343 Kyats )Foreign Resident (59089 Kyats )monmon (58624 Kyats )Northern Onestar (56676 Kyats )FB	FB